Dagaal ka dhex bilowday ItooBiyaanka Soomaaliya jooga. – Shabakadda Amiirnuur
December 6, 2020 2:03 pm by admin Views: 210
Ugu yaraan laba askari oo Itoobiyaan ah ayaa ku dhintay Saldhig Ciidamada Itoobiya ku leeyihiin Magaalada Halgan ee Gobalka Hiiraan kadib markii Ciidamada Dagaal dhex maray.
Qaarka mid ah Ciidaamda ayaa la sheegay in ay isku dayeen in ay kuwa kale hubka ka dhigaan taasuna waxay keentay in xabadu ka dhex bilaabato sidaas ayayna dhimashadu ku timid waxaana la aamisan yahay in tiradu inta la sheegay ka badan tahay dhaawacyana ay jiraan.
Tan iyo markii bil ka hor dagaalo ka dhex bilowdeen Dalka Itoobiya Ra’iisalwasaare Abey Axmad waxa uu il gooni ah ku eegayay Ciidamadiisa Soomaaliya jooga waxaanuu xir xiray qaar ka mid ah askar iyo saraakii ka soo jeeda Tigreega kadib mamrii hubkii laga dhigay.
Asakrtaan iyo saraakiisahaan ayaa Xukuumadda ka baqday in ay dilal geystaan maadaama Tigreega ay kasoo jeedaan xukuumadda Abiy weerartay.
Niyad jab ayaa laga dareemayaa Ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan iyadoo qaarkood qaar kale iska ilaalinayaan waxayna u badan tahay in Ciidamada Saaka in hubka laga dhigo la isku dayay ee dagaalku ka bilowday Tigree ka soo jeedaan.
Dhinac kale Xalay dagaalo ayaa ka dhacay qaar ka mid ah Gobalada Dalka Soomaaliya kuwaasoo ka dhan ahaa Ciidamada Shisheeye iyo Soomaalida la shaqeysa.
Ugu yaraan shan askeri oo ka tirsan Dowladda Federaalka ah ayaa ku dhintay Degmada Awdheegle ee Gobalka Shabeelaha hoose kadib weerar Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidin ku ekeeyeen saldhig ay ku sugnaayeen
waxa sidoo kale dagaaloka dhacay Degmada Howl wadaag ee Magaalada Muqdisho oo lagu beegsaay askarta federaalka halkaasoo laga maqlayay diryanka hubka la isweydaarsanayay.
Sidoo kale fariisimaha la weeraray Waxa ka mid ah kuwo ku kala yaalla Jalalaqsi, oo Hiiraan ka tirsan, qooqaani oo Jubada hoose ka tirsan iyo Baydhabo goobahaasoo ay kala joogaan qaarka mid ah Ciidamada Shisheeye iyo kuwa Soomaalid aha ee la shaqeeya.